भुटेको मकै खानुका यति धेरै फाइदा, क्यान्सरको खतरा समेत कम गर्छ - जानिराखौँ - ज्ञानविज्ञान
तपाई हामीमध्ये कतिपय भुटेका मकैका पारखी छौँ होला । भुटेको मकैको स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा गर्छ। यी हुन भुटेका मकैका फाईदा :
१. भुटेको मकैमा फाईबरको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार गर्छ। भुटेको मकै खाने मानिसलाई एसिडिटी र कब्जियतको कहिल्यै समस्या हुदैन्।
२. भुटेको मकैमा आइरन, कपर, र फस्फोरस र म्याग्नेसियमको मात्रा प्रर्याप्त हुने भएकोले शरिरमा हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ ।
३. यसमा आईरन, भिटामिन बी १२, फोलिक एसिडको मात्र प्रर्याप्त हुन्छ । यसले शरिरमा रगत अभावको समस्याबाट जोगाई कम्जोरी हुनबाट बचाउँछ ।
४. भुटेको मकैमा भिटामिन सी, केरोटिनाईड, बायोफ्लेविनाईड हुन्छ जसले रक्त प्रबाहलाई तीब्र बनार्ई रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ।
५. यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। मुटु रोगको खतराबाट बचाउँछ ।
६. भुटेको मकैलाई तातो पानीमा केही बेर उमाल्नुहोस। यस पानीलाई छानेर मिश्रि मिसाएर खाँदा पिसाब पोलेको वा किड्नी कम्जोरीको समस्या समाधान हुन्छ ।
७. भुटेको वा पोलेको मकैमा कार्बोाइड्रेडको मात्र पर्याप्त हुने भएकोले यसले शरिरलाई पर्याप्त उर्जा दिन्छ ।
८. भुटेको मकै खाँदा दातको व्यायायम गराउँछ । मकै खादा दात सफा गर्ने र बलियो बनाउछ ।
मकै खानुका यी अभुतपूर्व फाइदाः
मकैमा शरिरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ । मकै यस्तो खाद्य पदार्थ हो जसले मानिसको स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पु¥याउछ ।
जाडोमा भुटेको मकै :
मकै संसारमै सबैभन्दा धेरै खपत हुने अन्नमध्ये पर्दछ । यो खान मिठो हुनुका साथै पर्याप्त मात्रामा पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ ।
मकै पिठो, चिनी, रक्सीका रुपमा पनि प्रयोग हुने गर्दछ । यसलाई उसिनेर, पोलेर ,भुटेर पनि खान सकिन्छ । त्यस्तै, यसको पिठोलाई ढिाडो तथा रोटीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मकैमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए, बी, ईलगायत आइरन, कपर, जिंक, म्याग्निज, सेलेनियम, पोटासियम लगायतका खनिज पदार्थ पाइन्छन् । यसको सेवनले आन्द्राको क्यान्सरदेखि मुटुसम्बन्धि रोगहरु लाग्नबाट जोगाउाछ । त्यस्तै, अनुहारको चाउरीपना हटाउनुका साथै मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । त्यसैले जाडो मौसममा मकैको सेवन निकै लाभदायक मानिन्छ ।
यसले रगतमा कोलस्ट्रोलको मात्रा कम गरेर कार्डियोभास्कुलर समस्याको जोखिमलाई कम गर्छ । यसमा ओमेगा-३ फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ, जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । यसबाहेक, उच्च रक्तचापको समस्या कम गरेर हृदयाघात तथा स्ट्रोकको जोखिमसमेत कम गर्छ । नियमित रुपमा यसको सेवनले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोलको स्तर कम हुने गर्छ ।
गहुाको रोटीको तुलनामा मकैको रोटी पचाउन सजिलो हुन्छ । मकैमा पाइने फाइबर (रेशा) ले पाचन प्रक्रियालाई दुरुस्त राख्नुका साथै आन्द्रालाई राम्ररी काम गर्न सहयोग गर्छ । साथै, विषालु पदार्थलाई आन्द्रामा टाासिन दिदैन । त्यसबाहेक, यसको सेवनले एसिडिटी, कब्जियत तथा पेटसम्बन्धी समस्या पनि कम हुन्छ ।
रक्तअल्पताका विरामीका लागि मकै निकै लाभकारी मानिन्छ । किनकी यसमा जिंक, भिटामिन बी-१२, आइरन तथा भिटा क्यारोटिन पाइन्छ, जसले शरीरमा रातो रक्तकोषिका बढाउन मद्दत गर्छ । साथै, यसले शरीरका रक्तकोषिकालाई पर्याप्त मात्रामा पोषकतत्व प्रदान गरी रक्तअल्पताको समस्या घटाउाछ । पोषणविद्हरुका अनुसार एक कप कााचो मकैमा १२५ क्यालोरी हुनुका साथै २७ ग्राम कार्वोहाइड्रेट, चार ग्राम प्रोटिन, नौ ग्राम चिनी, दुई ग्राम फ्याट तथा ७५ ग्राम आइरन पाइन्छ ।
खानुका फाइदा क्यान्सरको जोखिम घटाउनेदेखि मुटु स्वस्थ राख्नेसम्म
मकैमा रहेको भीटा क्यारोटीन र भिटामिन ए छालाको लागि उत्तम मानिन्छ । नियमितरुपमा यसको प्रयोगले छाला चम्किलो हुन्छ । त्यसबाहेक, मकैमा भिटामिन सी तथा एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व लाईकोपिन पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसले छाला बिग्रन तथ चाउरी पर्नबाट जोगाउाछ । मकैमा पर्याप्त मात्रामा तेल पाइन्छ, जसलाई छालामा सिधै प्रयोग गर्न सकिन्छ । र, कयौ सौन्दर्यका साधनमा पनि मकै प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
Topics #भुटेको मकै
Don't Miss it कस्तो हुनेछ अब केहि वर्षपछिको संसार ?
Up Next त्यहि आमा हो, दुखमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउन खोज्ने – आमाको माया (भिडियोसहित)